Shirweynaha Qurba Jooga Beesha REER XUSEEN Oo Ka Qabsoomay Magalada London Iyo Fariin Digniina Oo Ay Udireen Shirkadaha Shidaalka Iyo Seeraha Banka Aroori | Salaan Media
Home Articles Shirweynaha Qurba Jooga Beesha REER XUSEEN Oo Ka Qabsoomay Magalada London Iyo...
Shirweynaha Qurba Jooga Beesha REER XUSEEN Oo Ka Qabsoomay Magalada London Iyo Fariin Digniina Oo Ay Udireen Shirkadaha Shidaalka Iyo Seeraha Banka Aroori
Qurba jooga Beesha Reer Xuseen ee ku kala nool daafaha caalamaka ayaa maalintii sabtida oo Bishu ahayd 1/11/2014 waxa ay isugu yimaadeen shirweyne ay ka soo qayb galeen aqoon yahano siyasiyiin odayaal dhalinyaro haween. Shirkaas oo aad loogaga wada hadlay xaaldda dalku marayo iyo arimo gaar beeshan iyo degaankeeda u khuseeya oo ay ka mid yihiin; arimaha shidaal baadhista iyo ciidamada la yidhi shirkad ayaa taba baraysa oo shirkadaha shidaalka ayay ilaalinayaan,
Seeraha AROORI Shirkaas waxa beeshu ka soo saartay baaq ay kaga soo horjeedo in Dawladu ay shirkado ajaanib ah oo ciidamo u gaar ah watta ay dalka soo geliso oo tidhaa shidaal ka baadha iyadoo aanu jirin ama la samayn xeerkii shidaal baadhista.
Waxaanu ognahay in shirkadahan iyo heshiisyada Wasiirka Macdantu la galay aan waxba laga ogayn oo wasiirku diiday in heshiisyada uu shirkadaha shidaalka la galay uu u gudbiyo baarlamaanka. Mar hadii aanu heshiisku heshiis sharci ah oo baarlamaanku ansixiyay ahayn waxaanu u aragnaa in ashkhaas iyo shirkado is wataa aany xaq u lahayn in ay baadhaan shidaalka iyo khayraadka dalka.
Arintan oo hore khilaaf weyni uga dhacay, waxaanu u aragnaa in aan qaabkii sharci darada ahaa ee wax loo waday waxba laga bedelin laakiin waxa soo kordhay uu yahay uun ciidan la rabo in lagu muquuniyo dadka shacabka ah ee degan dhulkan la leeyahay shidaal ayaa laga baadhayaa.
1 Waxaanu ka soo horjeednaa qaabka ay xukuumaddu u waddo shidaal badhista ee aan sharciga ahayn.
2 Waxaanu ka soo horjeednaa ciidamada loo qoranayo in lagu muquuniyo dadka shacabka ee degan dhulka la rabo in si sharci daro ah khayraad kooda loo baadho.anaga oo aan khayraadka dalka reer Somaliland ka lahayn dadka degaanka nalla degana aan waxba ka lahayn waxaanu diidanahay waxaan dadka degaanka lagala tashan oo dad gaari wataan in dusha lagaga keeno.
3 Waxaanu ka soo Horjeednaa seeraha ay xukuumaddu rabto in loo xidho dad gaara dhulka loo yaqaan AROORI oo ay noo daaqaan boqolaal kun oo xoolo ah oo aanay xukuumaddu meesha la gaynayo dadka iyo duunyada ku nool marka dhulkooda la seerto aanay wali sheegin.
4 waxaanu diidanahay in dadka reer Somaliland layska horkeeno oo nabad gelyo daro iyo colaad la dhexdhigo
5 Waxaanu ugu baaqaynaa Bulshada reer Somaliland in ay nagu taageeraan iska caabinta dulmigan oo aanaan sinaba ku aqbali doonin
Ugu dambayn waxaanu xukuumada somaliland u shegaynaa ugana digaynaa in ay iyadu dusha ku qaadan doonto wixii cawaaqib xumo ah ee kadhasha arimaha aanu kor ku xusanay
Qurba Joga Besha